Interior design Bucharest - Nobili Interior design, studio, architect, designer, company, design, prices
Ny tetikasam-panorenana anatiny dia mety ho lasa fanamaivanana raha toa ianao ka miangona aloha amin'ny serivisy design firms toy izany koa Nobili Interior Design. Miaraka amin'ny ekipa manana traikefa matihanina sy mpanamboatra, afaka manamboatra ny nofinofinao any Bucarest ianao raha tsy misy ny ezaka kely indrindra. Ny orinasan-tsena Architecture Nobili Interior Design dia orinasa mpitarika sy tetikasa drafitra anatiny si drafitra anatiny trano fonenana, trano fonenana, trano na trano ara-barotra ao Bucarest hatramin'ny 2008. Ny vahaolana napetraky ny mpamorona dia manampy ny mpanjifa hahita efitrano tsotra sy tsy misy fiafarana. Ny mpanjifa dia afaka misafidy endri-panambadiana klasika, maoderina, eklektika, barock, mediteraneana, na koa loko iray ho an'ny efitrano iray na mihoatra ny tranony ao Bucarest na any amin'ireo tanàna hafa any Romania. Alohan'ny hanombohana ilay tetikasa drafitra anatiny ho an'ny tokantrano, trano na trano ao Bucarest, mpamorona trano anatiny Hikaroka amin'ny antsipirihany ny hevitra sy ny safidin'ny mpanjifany izy ireo ary hampiseho azy ireo amin'ny endrika 3D. Noho izany, ny mpanjifa dia afaka mandinika, mandinika ary mandamina izay rehetra tokony hovaina ao amin'ny fanorenany, na any an-tokotany na ao an-trano. Hatreto, mirehareha ny amin'ny 150 isika tetikasa fanorenana anatiny for trano maoderina, trano maoderina miaraka amin'ny trano fidiovana sy trano hafa any Bukarest, Ilfov ary tanàna lehibe hafa any Romania. Afaka mandinika ny mpanjifa ny portfolio-fanodinana anatiny si drafitra anatiny mba hahatakarana bebe kokoa ny tetik'asa tetikasam-pananganana toy izany ary hahatsapa ny hery fanovàna itazanany orinasa fanorenana trano anatiny toy izany koa Nobili Interior Design. Ireo manampahaizana manokana antsika drafitra anatiny dia hanokatra ny masonao sy ny sainao ary hanampy anao amin'ny toro-hevitra ilaina amin'ny vokatra farany mba hampifaliana anao. Miara-miasa amin'ny tsara indrindra izahay mpanamboatra any an-tsaha drafitra anatiny, ka ny singa tsirairay manomboka amin'ny parquet, Toeram-pandriana sy trano fandroana, pila, famolavolana fiara, fitaovana an-trano ary fanaka malaza dia ny tolo-kevitra ambony avy amin'ny mpamorona. Miankina amin'ny tetibolan'ny mpanjifa, dia afaka misafidy ny fitaovana ilaina hanamboarana trano fandraisam-bahinin'ny klasika, trano maoderina maoderina na trano fisakafoanana eclectic. Ny fanapahan-kevitra dia tanteraka, manomboka amin'ny safidin'ny mpanjifa ny zava-drehetra, ary ny tetikasa dia mamarana drafitra anatiny ao Bucarest dia eo am-pelatanan'ny orinasa iray manokana Nobili Interior Design. Nobili Interior Design dia orinasa manam-pahaizana manokana drafitra anatiny izay manana tetikasa 50 ho an'ny drafitra anatiny sy ny famolavolana ao Bucarest, Voluntari, Otopeni, Pipera, Snagov ary Izvorani.